ကရင်ပြည်နယ် ဘားအံ-မြဝတီလမ်းမှာ ကုန်တင်ကား၊ ခရီးသည်ကား၊ အိမ်သုံးကားနဲ့ခရီးသည်တွေရာနဲ့ချီ ပိတ်မိ
ကရင်ပြည်နယ် ဘားအံ-မြဝတီလမ်းမှာ ကုန်တင်ကား၊ ခရီးသည်...
28 ส.ค. 2561 - 17:40 น.
ကရင်ပြည်နယ် ဘားအံမြို့နဲ့ မြဝတီမြို့ ဆက်သွယ်ထားတဲ့ ကားလမ်းပေါ်က ဂျိုင်းတံတားမှာ ဂျိုင်းမြစ်ရေတွေ မြင့်တက်လာတာကြောင့် ရာနဲ့ချီတဲ့ ကုန်တင်ကား ခရီးသွားကား ၊ အိမ်သုံးကားတွေနဲ့ ခရီးသည်တွေဟာ ပိတ်မိနေပါတယ်။
မြစ်ရေတက်လာတဲ့အပြင် လမ်းတွေလည်း ကျဉ်းတဲ့အတွက် ကားတွေ အလှည့်ကျ သွားလာရလို့ တချို့ ခရီးသည်တွေဟာ နှစ်ညလောက် လမ်းမှာ အိပ်ပြီးစောင့်ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒီလို လမ်းကြပ်လို့ ပိတ်မိတဲ့ကားတချို့က ၅ ရက်တောင် ရှိနေပါပြီ။ ဒီလို မြစ်ရေတွေတက်နေတာကြောင့် အခုရက်ပိုင်း ကုန်စီးဆင်းမှုကလည်း နှောင့်နှေးနေတယ်လို့ ခရီးသွားတွေက ပြောကြပါတယ်။
ဂျိုင်းကြိုးတံတားက ကားတစင်းကို အလေးချိန် ၁၃ တန်ပဲ တင်လို့ရပါတယ်။ ၁၃ တန်အထက် တင်တဲ့ကားတွေက အောက်က ဘောတံတားကို ဖြတ်ရတယ်။ အခုဂျိုင်းမြစ် ရေတက်လာတော့ ဘောတွေတက်လာပြီး ကားကြီးတွေ ဖြတ်တဲ့အခါ မဖြောင့်ဖြူးတော့ဘူး။ အခက်အခဲတွေ အများကြီးပဲ၊ လိုရာခရီးမရောက်ဘူး။ ခရီးသည်တွေအတွက် စားရေးသောက်ရေး အခက်အခဲရှိတာပေါ့ ၊ ထောင်နဲ့ချီပြီး ရှိတယ်။ တချို့ဆို တည တချို့ဆိုရင် နှစ်ည အိပ်ရတယ်လို့ လမ်းမှာ ကားကြပ်လို့ စောင့်ဆိုင်းနေရတဲ့ ခရီးသည် ကားမောင်းသူ ကိုနိုင်က ဘီဘီစီကို ပြောပါတယ်။
မြဝတီမှာ နှစ် ၅၀ အတွင်း အဆိုးဆုံးရေကြီး
မြဝတီမှာ နှစ် ၅၀ အတွင်း အမြင့်ဆုံး စိုးရိမ် ရေမှတ်ရောက်
ကရင်ပြည်နယ် ရေကြီးမှု ဇူလိုင် ၂၉ ရက် အခြေအနေ
ဘားအံနဲ့ မြဝတီမြို့ကို ဆက်သွယ်ထားတဲ့ လမ်းဟာ ထိုင်းနိုင်ငံက ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းနဲ့ လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေ အပါအဝင် အစားအသောက်နဲ့ အသီးအနှံတွေ စတဲ့ နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေး ပစ္စည်းတွေကို သယ်ယူပို့ဆောင်ရာမှာ အဓိက ကျတဲ့လမ်းကြောင်းတခုပါ။
ကျွန်မတို့ဆိုရင် ပိတ်မိတာ နှစ်ရက်တောင်ရှိနေပြီ၊ လောလောဆယ်မှာတော့ အိမ်သာတက်ဖို့ အခက်အခဲရှိတယ် ၊ စားရေးသောက်ရေး၊ သောက်ရေ အခက်အခဲလည်း ရှိတယ်။ ကားကြီးတွေရော ကားသေးတွေရော အကုန်ပိတ်မိနေတာ ၊ လမ်းမကောင်းတာတွေလည်း ပါတယ်လို့ လမ်းမှာပိတ်မိနေတဲ့ သစ်ခွကုန်သည် မဦးက ပြောပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံက ထုတ်ကုန်တွေကို ထိုင်းနိုင်ငံ မဲဆောက်မြို့နဲ့ နယ်နိမိတ်ထိစပ်နေတဲ့ မြဝတီမြို့ကတဆင့် ဘားအံမြို့အပါအဝင် မော်လမြိုင်၊ ရန်ကုန်၊ ပဲခူးမြို့နဲ့ တခြားမြို့တွေအထိ သယ်ယူပို့ဆောင်ရာမှာ ဒီလမ်းကို အသုံးပြုကြပါတယ်။
မြဝတီမြို့နဲ့ ကော့ကရိတ်မြို့ကြားက လမ်းအပိုင်းက ကောင်းပေမယ့် ကော့ကရိတ်ကနေ ဘားအံမြို့ ဆက်သွယ်ထားတဲ့ လမ်းပိုင်းကတော့ လမ်းကြမ်းနေဆဲ ဖြစ်တယ်လို့ ဒေသခံတွေက ဆိုပါတယ်။
อัลบั้มภาพ ကရင်ပြည်နယ် ဘားအံ-မြဝတီလမ်းမှာ ကုန်တင်ကား၊ ခရီးသည်ကား၊ အိမ်သုံးကားနဲ့ခရီးသည်တွေရာနဲ့ချီ ပိတ်မိ